Dolphin's Gold Steller Jackpots | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့! Dolphin's Gold Steller Jackpots | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့!
လင်းပိုင်ရွှေကြယ်ထီပေါက်နှင့်အတူဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်း slot ကဂိမ်းအားဖြင့်လစာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးထီပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်5reels နှင့်4ပူဇော်ကြောင်းအတန်း 40 အပေါ်အလောင်းအစားလုပ်ဖို့ fixed paylines. အဆိုပါ slot ကအချို့သောရော့ခ်ပေါ်သို့ crashing နဲ့တူပုံပေါ်ကြောင်းလှိုင်းတံပိုး၏အသံနှင့်အတူရေအောက်ပင်လယ်၏နောက်ခံအတွက်သတ်မှတ်. ဒါဟာရောင်စုံသန္တာနှင့်အတူလှပသောငါးမွေးကန်များ၏မြင်ကွင်းကိုကမ်းလှမ်း, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထံမှအထပ်ထပ်ပုစွန်သူတို့နှင့်အတူမြင့်တက်သှ. တချို့အေးဂီတလမ်းကြောင်းနဲ့အသံသက်ရောက်မှုနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော, you are sure to immerse yourself in this magical theme. The betting limits of this game are £0.48 minimum and £60 maximum per spin. You can opt for your phone bill as an option to add funds to your account to play this game too.
The developer of this magical looking slot is NYX (Lightening Box),apioneer in the casino gaming industry with hundreds of slot titles offered for online users across the world. သူတို့ကဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်အားဖြင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မယ့်တရားဝင်ကုမ္ပဏီများမှာ, ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းဂိမ်းအားဖြင့်လစာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထီပေါက်နှင့်အတူပိုက်ဆံအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်.
ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်း slot ကဂိမ်းအားဖြင့်လစာနှင့်အတူဤထီပေါက်ဂိမ်း၏ဆောင်ပုဒ်ကိုက်ညီသောငါးအခြေစိုက်စခန်းသင်္ကေတများနှင့်အတူကစားသည်ကို. သူတို့ကလျှပ်စစ်ငါးများမှာ, ပင်လယ်လိပ်, စင်းငါး, ရောင်စုံသန္တာနှင့်တစ်ဦး seahorse. ကတ်များကစားရာမှအချို့ကအောက်ပိုင်းတန်ဖိုးကိုသင်္ကေတများဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည် 9, 10, J ကို, မေး & K သည်. လူအပေါင်းတို့သည်သင်္ကေတများ, လျှပ်စစ်ငါးနှင့်အတူပေးဆောင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် 500 အဆရသောအခါ5သင်္ကေတတစ်ခု payline ပေါ်တွင်ပေါ်လာနှင့် 1000 ငါးရိုင်းသင်္ကေတများဒီသင်္ကေတကိုအစားထိုးသည့်အခါကြိမ်.
ရိုင်း Feature ကို: ဒီထီပေါက်နှစ်ခုရိုင်းသင်္ကေတများဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းဂိမ်းအားဖြင့်လစာနှင့်အတူရှိပါတယ်; တဦးတည်းခြေရင်းဂိမ်းနှင့်သာအခမဲ့လှည့်ခြင်းများစဉ်အတွင်းပေါ်လာသောအရာသည်အခြားတဦးတည်းရွှေလင်းပိုင်အတွက်ပေါ်လာသောအပြာလင်းပိုင်ဖြစ်ပါသည်. ကိုရွှေလင်းပိုင်၏ဖြစ်ရပ်အားလုံးကိုပေမယ့်ကိုရွှေလင်းပိုင်နှင့်ဒုနျအလှနျအဘို့အပြာအစားထိုး. အပြာရောင်သာ reels ပေါ် 2,3&4ရွှေအပင် reel ပေါ်နေချိန်တွင် 5.
ကြဲဖြန့်သင်္ကေတ: The blue dolphin is the scatter symbol as well and when six or more of it appears duringaspin, the free spins are triggered. Since wild appears in stacked formation, အထိ 21 free spins is possible in this game. From6သို့ 12 wild symbols you can get3သို့ 21 symbols in multiples of3for every additional blue dolphin.
အကျဉ်းချုပ်: With lots of free spins to win that enhances big win opportunities, this jackpots with pay by phone bill is definitely the kind that offers better success rates of winning money.
Cool Wolf | 100% ကွိုဆိုအပိုဆု
လင်းပိုင် Reef | 100% ကွိုဆိုအပိုဆု